Sanibonani bangane abathandekayo. Kunamakhulu ezifundo zaseJalimane kusayithi lethu. Sihlukanise lezi zifundo ngesicelo sakho. Ikakhulukazi abangane bethu abaningi bebebuza imibuzo enjengokuthi “yisiphi isifundo okufanele baqale ukufunda isiJalimane”, “kufanele silandele ngokulandelana kwezifundo”, “yiziphi izifundo okufanele sizifunde kuqala”.
Ngaphezu kwalokho, sakhe uhlu lwabaqalayo lokufunda isiJalimane. Kulabo abaqala ukufunda isiJalimane, ngisho nalabo abangakhulumi noma yisiphi isiJalimane, okungukuthi, labo abafunda isiJalimane kusuka ekuqaleni, balubukeze ngokucophelela lolu hlu.
Lufanele kufundwe kanjani lolu hlu? Bangani abathandekayo, sibhale lezi zihloko ezilandelayo ngokubheka abangane abangakhulumi noma yiluphi ulimi lwesiJalimane. Uma ulandela le oda, uzoqala ukufunda isiJalimane kusuka ekuqaleni. Sincoma ukuthi ufunde izihloko ngokulandelana. Ungeqi imigqa. Funda isihloko hhayi kanye kuphela kepha kaningana. Qiniseka ukuthi usifundile isifundo osifunda kahle futhi ungadluleli esihlokweni esilandelayo uze usifunde kahle.
Uhlu olungezansi ngolwalabo abafuna ukufunda isiJalimane bebodwa ngaphandle kokuya esikoleni noma ezifundweni. Izikole noma izifundo zolimi lwangaphandle sezivele zinohlelo nokulandelana kwezifundo okuqaliswe yizo. Sincoma i-oda elilandelayo labaqalayo ukufunda isiJalimane.
Bangani abathandekayo, sikholwa ukuthi uma uqala ukufunda izifundo zethu zaseJalimane ngokulandelana esikunikeze ngenhla, uzobe uhambe ibanga elide ngesikhathi esifushane. Ngemuva kokufunda izihloko eziningi kangaka, manje ungabheka ezinye izifundo kusayithi lethu.
Isibonelo, ungaqhubeka ukusuka esigabeni sezifundo eziphakathi nezithuthukile zaseJalimane, noma uma ufuna ukuthuthuka ngokokukhuluma kwesiJalimane, ungaqhubeka ukusuka esigabeni samaphethini wenkulumo yaseJalimane asetshenziswa empilweni yansuku zonke, ungabheka izibonelo ezahlukahlukene zezingxoxo.
Uma ufisa, kukhona futhi umsindo nokufunda izindaba zaseJalimane kusayithi lethu. Lezi zindaba zivezwa ngokukhethekile kwabaqalayo ukuba bafunde isiJalimane. Isivinini sokufunda sihamba kancane ukuqonda amagama futhi sikholelwa ukuthi abangani abafunda isiJalimane ezingeni elithile bazokwazi ukuqonda amagama amaningi. Ukulalela lezi zinhlobo zezindaba ezilalelwayo futhi uzifunde ngasikhathi sinye ngenkathi uzilalele kunenzuzo enkulu kakhulu ekwenzeni ngcono isiJalimane sakho.
Ngaphezu kwalokho, kunezigaba eziningi kusayithi lethu ezinjengehlelo lokufunda laseJalimane, izivivinyo zaseJalimane, izivivinyo, izifundo zomsindo waseJalimane, izifundo zevidiyo zaseJalimane.
Njengoba kunezifundo eziningi ezihlukile zaseJalimane esizeni sethu esingeke sizibhale lapha, ungaqhubeka ufunde isiJalimane kunoma yisiphi isigaba ngemuva kokuqeda uhlu olungenhla.
# Izifundo ZaseJalimane Zabaqalayo
Tags: funda isiJalimane, izifundo self-german, funda isiJalimane wedwa, Izifundo zaseJalimane kusukela ekuqaleni, izifundo eziyisisekelo zesiJalimane, Izifundo zaseJalimane zabaqalayo